အသုံးပြုသူအများစုသည်ပြောင်းလဲခြင်းကိုမကြိုက်ကြပါ Martech Zone
ငါအကြောင်းကိုအများကြီးဖတ်နေခဲ့တာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ရှိသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်အသစ် နှင့်မည်သူမျှသံသယမှတဆင့်, ပြောင်းလဲမှုများအပေါ်ပြန်တွန်းကြပါပြီ စစ်တမ်းတစ်ခုကို Facebook App တစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်.
ဒီဇိုင်းကိုအတော်အတန်ဖတ်ပြီးလေ့လာသူတစ် ဦး အနေနှင့်ပိုမိုရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သည်။ Twitter ရဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်စီးသို့၎င်းတို့၏စာမျက်နှာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ငါ Facebook အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသေချာဘူး။ ပထမကသူတို့ကိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ငါ Facebook ကိုလေးစားတယ် အန္တရာယ်ယူပြီးသည်။ အထူးသဖြင့်တိုးတက်မှုနှုန်းတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အသွားအလာပမာဏနှင့်အတူဤအရာကိုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုသည်အမြဲတမ်းခက်ခဲကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သော application တစ်ခုအတွက် user interface အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါကသင့်အားကျေးဇူးတင်သည့်အီးမေးလ်များရောက်လာလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါနှင့်။ အသုံးပြုသူများသည်ပြောင်းလဲမှုကိုမုန်းသည်။
ငါ Facebook အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်အပေါ်ပိုမိုဖတ်ရှုဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကသူတို့သည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်ပါဝါသုံးစွဲသူများသို့မဟုတ်အာရုံစိုက်အုပ်စုတစ်စုကို ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်း၊ အချို့သောကွန်ပျူတာဆက်သွယ်မှုနှင့်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်သူများအားငွေအမြောက်အများပေးပြီးအများစုဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခြေခံ၍ အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အများစုဆုံးဖြတ်ချက်ချသော်လည်းစို့။
အများစု၏ဆုံးဖြတ်ချက်များသည်တစ်မူထူးခြားမှုကိုခွင့်မပြုပါ။ ဖတ်ပါ ဂူဂဲလ်မှနုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Douglas Bowman ၏ကြေငြာချက်ဒါကမျက်စိဖွင့်ပေးသူပဲ
Focus အုပ်စုများစို့, ဖြစ်စေအလုပ်မလုပ်ပါ။ အုပ်စုများသို့စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများကိုဝေဖန်မှုများပြုလုပ်ရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းသောအထောက်အထားများစွာရှိသည်။ မည်သည့် ဒီဇိုင်း။ Focus အုပ်စုများသည်ကြီးကျယ်သော၊ အာရုံစိုက်အုပ်စုများသည်အသစ်သောနှင့်လန်းဆန်းစေသောအရာထက်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုအနည်းဆုံးဘုံပိုင်းခြေသို့ယူဆောင်လေ့ရှိသည်။
ဘာကြောင့် Facebook ပြောင်းလဲ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု - မင်းဘာကြောင့်အတင်းအကျပ်အပြောင်းအလဲကိုရွေးချယ်တာလဲ။ ငါထင်တာကတော့ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်ဒီဇိုင်းအဟောင်းသည်အသုံးပြုသူအတွက်အတော်လေးရိုးရှင်းသောရွေးချယ်မှုများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အသုံးပြုသူများကို၎င်းတို့အပေါ်အတင်းဖိအားပေးမည့်အစားသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးချရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။
Navigation System အဟောင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သုံးစွဲသူအသစ်သည် (ကျနော့်အမြင်) ထရန်နှင့်ပြေးရန်ယခုပိုမိုလွယ်ကူလာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် - သုံးစွဲသူအသစ်များအတွက် default interface ကိုလုပ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအတွက်ထပ်ဆောင်းရွေးချယ်စရာများကိုဘာကြောင့်မပေးသနည်း။
ယခုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာမေးနေသောမေးခွန်း မကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ Interface အသစ်ပေါ်ရှိစစ်တမ်းသည် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောအနိမ့်ဆုံးနှုန်းသို့ရောက်သည်နှင့်သတိပြုပါ။ ဒီဇိုင်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော်လည်း၊ စစ်တမ်းရလဒ်များသည်အောက်သို့ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပါကစစ်တမ်းကိုကျွန်ုပ်အာရုံမစိုက်တော့ပါ။
Facebook က မ သို့သော်အပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးကိုပေးသည့်အခါသုံးစွဲသူအများစုကပုံစံအသစ်ကိုစောင့်ရှောက်သည့်အခါအမြီးအမောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်အပိုဆောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်သော်လည်းပြောင်းလဲမှုတွန်းအားပေးရန်အခြားနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အမြဲအကြံပြုသည်။ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှု or ပြောင်းလဲမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာများ အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုရှိပါတယ်။
Tags: Google Webmaster tools များကျောက်တံတားမိုဘိုင်းစျေးကွက်မိုဘိုင်းဖုန်းOn-site seoဆိုက်ဘာ seoprစာနယ်ဇင်းများနည်းပညာ
မတ်လ 21, 2009 မှာ 11: 25 pm တွင်
Facebook ဟာ လူတစ်ထောင်လောက် သေပြီး ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက တစ်ခုတည်းသော အမြင်ပါ။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 1: 34 AM
သေချာတာတစ်ခုက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတွေက Facebook ကို စွဲစွဲလန်းလန်းနဲ့ ဆက်သုံးနေကြမှာ သေချာပါတယ်။
ဤဒီဇိုင်းသည် "ကွဲပြားသည်" ဖြစ်၍ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ယခင်ပုံစံထက် ပိုမိုချောမွေ့သောကြောင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်ပိုနှစ်သက်ပါသည်။
သို့သော် Facebook သည် အသုံးပြုသူများကို ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် မပြောင်းရန် ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ပေးသင့်သည်။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 8: 15 AM
ဒါပေမယ့် ဒီပြောင်းလဲမှုဟာ နောက်ထပ် Facebook ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ခြေဖဝါးကနေ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ ပြီးတော့ ဒါကို လူတွေလည်း မမုန်းခဲ့ကြဘူးလား။
ဒီတော့ အရင်ဒီဇိုင်းကို ပြန်ပြောင်းဖို့ စည်းရုံးတဲ့သူတွေက အရင်ဒီဇိုင်းကို ပြန်ပြောင်းဖို့ စည်းရုံးတဲ့သူတွေရောလား။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 7: 19 pm တွင်
ပြောင်းလဲမှု၏ ပြဿနာမှာ အသစ်တစ်ခုခုကို လေ့လာရန် လိုအပ်သည့် အလုပ်ပမာဏသည် သင်သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည့် အလုပ်ပမာဏထက် များစွာ ပိုများနေခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက ကျွန်ုပ်သည် အဓိကဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင့်မြှင့်တင်ရေးပရောဂျက်တစ်ခုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး လူတိုင်းသည် ဆိုးရွားလှသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ကို လုံးဝပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်လိုကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီး အသုံးပြုရခက်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် လူထောင်ပေါင်းများစွာက နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီး ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို အတိအကျသိပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွင် အင်တာဖေ့စ်အဟောင်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် အသင်းကို ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ option ကို အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် အလွန်တိုးတက်ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းကို စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ ဖြည်းညှင်းစွာ၊ လူတိုင်းသည် ဒီဇိုင်းအသစ်ဆီသို့ ကူးပြောင်းလာကြသည်။
ဒါက Facebook လုပ်သင့်တဲ့အရာပါ။ ယင်းအစား၊ လူတိုင်းနီးပါး ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပြီ။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 8: 29 pm တွင်
အပြောင်းအလဲကို လူတွေမကြိုက်တဲ့ အယူအဆဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုပါပဲ။ သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနပြုချက်သည် အမှန်တကယ် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ရော့ဘီပြောသည့်စကားများအတိုင်း လူများမကြိုက်ခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းများကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် အတင်းအကြပ်ဖိအားပေးခံနေရသည်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ် Doug!
မတ်လ 22, 2009 မှာ 9: 14 pm တွင်
ဟမ် – အဲဒါ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလို့ ဂျိမ်းစ်က သဘောမတူဘူး။ လူတွေမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိကြပြီး အဲဒီမျှော်လင့်ချက်တွေကို လိုက်မမီတဲ့အခါ စိတ်ပျက်အားငယ်စေတယ်။ ပုံနှိပ်ခြင်း ဒီဇိုင်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဒီဇိုင်းအသစ်များ အများအပြားကို ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သုံးစွဲသူ၏ အပြုအမူကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည့် လက်ကား အပြောင်းအလဲကို ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း ၎င်းတို့က ၎င်းကို မကြိုက်ပါ။
အားလုံးက မျှော်မှန်းချက်အတိုင်း ပြန်သွားနိုင်တယ်။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 9: 45 pm တွင်
ကျွန်တော်ကတော့ လူသားတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို အကြမ်းဖျင်းပြောတာပါ။ လူတွေက အပြောင်းအလဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့မှတ်ချက်က ငါ့ (နဲ့ Robby) ရဲ့ အချက်ကို တော်တော်အထောက်အပံပြုတယ်။ လူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ အပြောင်းအလဲကို တွန်းအားပေးတယ်။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 8: 52 pm တွင်
Doug၊ ကျွန်တော်ဟာ Facebook အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာက အခြေခံအားဖြင့်တော့ အဆင်အပြင်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်ကြာမှ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံကို ပြန်ပြောင်းဖို့ Facebook အတွက် တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြသူတွေပါ။ မလိုချင်ဘူး။ ငါဆိုလိုတာက၊ လူတွေက သူတို့ရဲ့အချိန်နဲ့ ပတ်သက်တာ ပိုကောင်းတာ ဘာမှမရှိဘူး ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲမှုတိုင်းကို အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဟာ အမြဲလိုလို NO ပါတဲ့ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အပိုင်းကို အသုံးချနေကြတာပါပဲ။ ၎င်းကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ထားပေးပါ၊ ဤဆူညံသံများအားလုံးသည် အခေါင်းပေါက်ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများအားလုံးကို သဘာဝအတိုင်း ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Facebook က အောင်မြင်မယ် ထင်တယ်၊ လူတွေက Facebook ကို ဆက်သုံးကြလိမ့်မယ်။ အခုထိ မြင်ဖူးသမျှ အပြောင်းအလဲတွေ အားလုံးက အဓိပ္ပါယ်အများကြီး (ငါ့အတွက်တော့ အနည်းဆုံး)။ Twitter-like stream သည် ကောင်းမွန်သောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး လူများက ၎င်းတို့နောက်လိုက်မည့်သူကို ရွေးချယ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည် (ကျွန်တော်အတွက်၊ ၎င်းသည် အပလီကေးရှင်းပို့စ်များနှင့် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သောပို့စ်များကို ကြမ်းတမ်းစွာ စစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်)။ ကျွန်ုပ်၏အချက်မှာ Facebook သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာနှစ်ရပ်လုံး၏ အကောင်းဆုံးကို ပေးထားပြီးဖြစ်သည် - သူငယ်ချင်းများနှင့် စာမျက်နှာများ/အုပ်စုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လျှို့ဝှက်ရေးနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကို စစ်ထုတ်မှုများမှတစ်ဆင့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထပ်လောင်းအပိုဆုတစ်ခုသည် စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် လူများကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းကန့်သတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
အခုလို အတွေးပွားစေတဲ့ ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 22, 2009 မှာ 9: 15 pm တွင်
မင်းမှန်တယ်ထင်တယ်- အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ 'ခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်' အပြုအမူတစ်ခု သေချာပေါက်ရှိတယ်။
စကားဝိုင်းသို့ ပေါင်းထည့်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။